Kooxaha Arsenal,West Brom,Aston Villa iyo Crystal Palace oo Guulo Gaaray “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxaha Arsenal,West Brom,Aston Villa iyo Crystal Palace oo Guulo Gaaray “SAWIRRO”
Kooxda Arsenal ayaa u hal dhibic u soo jirsatay kooxda Manchester City oo kaalinta labaad uga jirto horyaalka,ka dib markii ay garoonkeeda Emirates 3-0 uga badisay kooxda West Ham United.
Kooxda Arsenal ayaa goolka la hor martay,waxaana dhamaadkii qeybtii hore ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Olivier Giroud,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Aaron Ramsey ayaa daqiiqadii 82-aad ee ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Arsenal.
Ciyaaryahan Mathieu Flamini ayaa dhamaadkii ciyaarta goolka sedaxaad u dhaliyay kooxda Arsenal.
Kooxda Arsenal ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta sedaxaad,waxana ay leedahay 57-dhibcood,halka kooxda West Ham ay horyaalka uga jirto kaalinta tobanaad,iyadoo leh 39-dhibcood.
Kooxda West Bromwich Albion ayaa garoonkeeda The Hawthorns 1-0 uga badisay kooxda Stoke City.
Ciyaaryahan Brown Ideye ayaa daqiiqadii 20-aad ee ciyaarta goolka guusha u dhaliyay kooxda West Bromwich,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Labada kooxood wax gool ah iskama dhalin qeybtii danbe ee ciyaarta.
Kooxda Stoke City ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta sideedaad,waxana ay leedahay 42-dhibcood,halka kooxda West Bromwich ay horyaalka uga jirto kaalinta 13-aad,iyadoo leh 33-dhibcood.
Kooxda Sunderland ayaa waxaa garoonkeeda Stadium of Light 0-4 uga badiyay kooxda Aston Villa.
Kooxda Aston Vill ayaa qeybtii hore ee ciyaarta dhalisay afar gool,waxaana min labo gool kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Christian Benteke iyo Gabriel Agbonlahor,sidasi ayaana lagu kala nastay qybtii hore ee ciyaarta.
Taageerayaasha kooxda Sunderland ayaa laga celceliyay tababare Gus Poyet oo ganaaxan,islamarkaana ciyaarta ka daawanayay tarabuunka.
Inta badan taageerayaashii kooxda Sunderland ayaa garoonka cildeeyay dhamaadkii qeybtii hore ee ciyaarta,ka dib markii qeybtii hore ee ciyaarta afar gool laga dhaliyay kooxda ay taageeraan.
Tababare Tim Sherwood ayaa guushii sedaxaad oo xiriir ah u hor seeday kooxda Aston Villa.
Kooxda Aston Villa ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uag jirto kaalinta 16-aad,waxana ay leedahay 28-dhibcood,halka kooxda Sunderland ay horyaalka uga jirto kaalinta 15-aad,iyadoo leh 26-dhibcood.
Kooxda Crystal Palace ayaa garoonkeeda Selhurst Park 3-1 uga badisay kooxda Queens Park Rangers.
Kooxda Crystal Palace ayaa qeybtii hore ee ciyaarta dhalisay sedaxda gool,waxaana u kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Wilfried Zaha, James McArthur iyo Joel Ward.
Ciyaaryahan Matthew Phillips ayaa goolka uu u dhaliyay kooxda QPR waxa uu ka laaday meel goolka u jirto 43-talaabo.
Kooxda Crystal Palace ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta 12-aad,iyadoo leh 33-dhicbood,halka kooxda QPR ay ka mid tahay sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hooseeya.
Kooxaha Bayern Munich,Frankfurt,Mainz iyo Hoffenheim oo Guulo Gaaray